Miaraka aminao .... SolydXK | Avy amin'ny Linux
Najanona ny fanontana ofisialin'ny LMDE KDE sy Xfce. Te hisaotra an'i Schoelje aho noho ny asa mahafinaritra nataony tao anatin'ny fiarahamoninay. Matokia fa ny ezaka nataony sy ny valiny dia tsy voamariky.
Izaho sy Schoelje dia miresaka matetika. Ny dingana manaraka lozika ho an'ny LMDE KDE sy LMDE Xfce dia ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny fitsapana kalitao sahaza azy. Satria ambany dia ambany ny fangatahana ary mivelatra be ny ekipa, dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanontana amin'ny fiaraha-monina (izay ofisialy, fa noho izany dia tsy misy fanoloran-tena atao amin'ny fandaharam-pamoahana).
Rehefa nanolo-kevitra ny hitazona ireo tetik'asa ireo aho dia nisalasala i Schoelje ary niafara tamin'ny fihenany. Amin'ny fanontana ofisialin'ny Mint dia ho very ny fahafahany mamoaka isaky ny maniry izy ary matetika araka izay itiavany azy, ny fampisehoana am-pahibemaso ireo ISO fa tsy fanarahana ny Quality Control ary ny fanapahan-keviny sasany dia tokony haverina. Tamin'ny farany dia nanjary na liana hanaraka ny fahitany izy na hanao zavatra amin'ny fomba Mint. Betsaka ny mahatsara sy maharatsy azy eto ary manaja ny fanapaha-kevitrao aho. Schoelje dia mifantoka amin'ny fizarana vaovao antsoina hoe SolydXK.
I Fred no mpikirakira ny edisiona lehibe KDE (ilay miorina amin'ny Ubuntu) ary mandrindra ihany koa ny famoahana ny kanelina LMDE sy ny MATE miaraka amin'ny Update Pack 6. Handalo ny fanontana LMDE KDE sy Xfce amin'ny alàlan'ny QA izy ary angamba hamoaka azy ireo. toy ny fanontana ofisialin'ny vondrom-piarahamonina.
Handre bebe kokoa an'i Fred atsy ho atsy ianao ary na dia tsy eo an-tsaintsika aza izany dia iriko i Schoelje ho tsara indrindra
Izany no tenin'i Clem Lefebvre, mpitarika ny Linux Mint. Androany, 1 martsa, namoaka ny SolydXK ISO voalohany i Schoelje.
Amin'ny lafiny iray SolydK, miaraka amin'ny tontolon'ny KDE dia miaraka amin'ny Firefox, Thunderbird, VLC, Amarok, PlayOnLinux ary Libreoffice izy ireo. Ary ho an'ny SolydX iray hafa miaraka amin'i Xfce, dia miaraka aminy ihany fa miaraka amin'i Abiword sy Gnumeric (na dia afaka apetraka aza ny Libreoffice) ary Exaile fa tsy Amarok.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Miaraka aminao…. SolydXK
Voaloton'ny gnumeric sy abiword aho
fa ireo mametraka ao anaty 1 minitra
Mihabetsaka ny distros lehibe no mamoy ny mpamorona.
Tena tiako ny fitambaran'ireo programa ataon'i Solyd, mendrika tsiro
Tsy azoko hoe maninona, raha mampiasa KDE izy ireo dia tsy mampiasa KMail .. na izany aza
Thunderbird dia ambony amin'ny kmail, ary raha miresaka momba ny fitantanana kaonty outlook.com isika dia tsy milaza aminao akory aho, tamin'ny kmail dia nanana olana maro aho.
Kmail, ao anatin'ny sehatr'asa Kontact sy miaraka amin'ny fifandraisana misy ao aminy miaraka amin'ireo programa Kde sisa. Tsy azo ampitahaina amin'ny Thunderbird, izay mpamaky mailaka sy RSS ihany.
Ary koa, tsy tapaka ve ny Thunderbird?
Tsy hitako tsara fa mametraka rafitra Kde izy io, ireo programa meta izay ankoatry ny tsy fifandraisany amin'ireo programa hafa amin'ny fizarana, manampy tranomboky be loatra sy lanja maty, very ny soa rehetra mety hisafidianana programa izay mampifandray sy mizara data ary koa miasa tsara kokoa izy ireo.
Tsy tokony hanitatra koa isika, eo am-baravarankely sy mac, misy programa an'arivony misy tranomboky maro an'arivony ary tsy misy olona maty, ny anao dia toy ny milaza fa amin'ny windows dia tokony hampiasa ny fomba fijery eny na eny xD
Ary tsia, Thunderbird dia tsy ajanona.
Tsy azoko mihitsy ny nahatonga an'i Kmail hiasa tsara… I Thunderbird dia mialoha mialoha azy eto.
Fikitika sarotra kokoa ny manamboatra azy io. Saingy amin'ny fidirana amin'i Arkonadi sy Qt4 dia io no safidy tsara indrindra.
Maimaimpoana toy izany anefa ireo distros raha toa ka misafidy ireo seho ankafiziny ireo.
Andao, distro hafa bebe kokoa hamoahana azy xD
Tsy afaka niasa tsara tamin'ny LMDE KDE mihitsy aho, nianjera be tsy toy ny Mint KDE izay mandeha tsara.
Misy ny fizarana izay miasa tena tsara, efa ao amin'ny kinova 7 Alpha amin'ny 64 bits, efa nampiasaiko izy ary milamina tsara, atoroko azy; Nantsoina hoe Pear Linux izy io ary azonao sintonina avy eto: http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/02/pear-os-7-alpha-2-64-bit-disponible_28.html
Ny iray hafa izay te hihira ny "Ny làlako."
Ny lalako no lalana sarotra !!! 😀
Tsara ny fisafidianana fonosana saingy amiko dia distro »mitovy kokoa»
Mihodina ve ity distro vaovao ity sa tsia? Manao ahoana izy ao?
ZTE Grand S LTE: Goavana Mahagaga any Sina
Fihaonana voalohany an'ny Blender Community ao amin'ny UCI